Efesôsy - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Efeso)
I Efesôsy na Efesosy na Efeso na Efezy dia iray amin'i reo tanana tranainy indrindra sy nanana ny maha izy azy amin' ireo tanan-dehibe grika tany Azia Minora, ka izy no tanàna voalohany tao Iônia. Atao hoe Ἔφεσος / Éphesos izy amin' ny teny grika fa Ephesus kosa amin' ny teny latina ary Apaša amin' ny teny hitita (na heteana).
Sarivongan' i Artemisy tao Efeso.
Na dia any amin' ny fito kilometatra any an-tanety miala avy amin' ny sisin-dranomasina, eo akaikin' ny tanànan' i Selçuk sy Kuşadası ao amin' ny tapany andrefan' i Torkia ankehitriny aza ny sisam-paharavan' i Efesôsy dia isan' ireo seranan-tsambo lehibe tao amin' ny Ranomasina Egea (grika: Αιγαίο Πέλαγος / Aigaio pélagos) izy; tao akaikin' ny fivarinan' ny ony anatôliana atao hoe Kaistrôsy (grika: Κάϋστρος / Kaustros) izy.
Ireo tanàna misy ny fiangonana fiton' ny Apôkalipsy ao Asia Minora (na Anatôlia)
Ilay fitoerana masina atao hoe Artemisiôsy, izay natokana ho an' ny andriamanitra Artemisy (grika: Ἄρτεμις / Ártemis) mpiahy ny tanàna, dia isan' ireo Zava-mahagaga fito eto amin' izao tontolo izao sady isan' ireo nampalaza an' i Efesôsy, ary tao amoron-drano no nisy azy.
Vokatry ny tany nentin' ny onin' i Kaistrôsy sy ny fiovaovan' ny toetany ary angamba ny horohorontany no nahatonga ny fikisahan' ny morontsiraka any andrefana sy ny fanotoran' ny fasika ny serana-tsambon' ilay tanàna ka nahatonga ny fandaozana azy holasa haolo.
Tanàna misy ireo fiangonana fiton' ny Apôkalipsy:
Efesôsy (na Efezy)
Pergamôsy (na Pergama)
Sardisy (na Sarda)
Laôdikea (na Laôdisea na Laôdikia)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Efesôsy&oldid=1013087"
Dernière modification le 26 Jolay 2021, à 10:29
Voaova farany tamin'ny 26 Jolay 2021 amin'ny 10:29 ity pejy ity.